Maalinta: Maarso 6, 2019
Qiimaha ku dhowaad ee 5 / 2018 GCC ee Waddada Tareenka ee TCDD 694481 Agaasinka Iibsiga ee Gobolka (TCDD) iyadoo ay ugu wacan tahay qandaraaska dhismaha dalladda dadka lugeynaya ee ku xeeran Tatvan Gar. [More ...]
Waddooyinka iyo Sidewalks on Gazanfer Bilge Avenue waa la Cusboonaysiiyey
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, kadib maalmihii qaboobaa ee wadooyinka sii xumaanayey iyo jidadkuba waxay samaynayaan shaqo dayactir. Khasaarooyinka ka dhaca wadooyinka iyo gaar ahaan jidadka wadada Gazanfer Bilge Boulevard barafka kadib [More ...]
Tramway Expedition ee Isbitaalka Magaalada Eskisehir ayaa bilaabmay!
Gawaarida rakaabka ee Eskisehir City Hospital ayaa bilaaban doona maalinta Axada 10 Maarso 2019 wuxuu cadeeyay in muwaadiniinta Isbitaalka Magaalada Eskisehir lagu qasbay waqti ka waqti waqti inay gaadiid raacaan. Warka wanaagsan wuxuu ka yimid saraakiisha ESTRAM. magaalada [More ...]
Ku noolow quruxda guga ee tareenka
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun maqaalka cinwaankiisu yahay Yaş Khibradda quruxda gu'ga ee Train ısında waxaa lagu daabacay joornaalka Maarso ee joornaalka Raillife. Waa kan warqaddii Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun; Jiilaal culus [More ...]
Waxaan dhisi karnaa naqshad weyn ee nidaamka tareenka ee Istanbul
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan maqaalka cinwaankiisu yahay ama Aasaasidda Dhismaha Nidaamka Tareenka ee Istaraatiijiyadda Magaalada Istanbul ayaa lagu daabacay mareegta Maarso ee majaladda Raillife. Waa kan warqaddii Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha; Madaxweynaha Jamhuuriyadda [More ...]
Basmane Gar'a Shidaal Sare Solaris ayaa la aasaasay
İzmir TCDD 3. Maareeyaha Selim KOÇBAY, Maareeyaha Kaaliyaha Gobolka Mehmet Soner BAŞ, TCDD Transportation Inc. İzmir Caawiyaha Caawiyaha Gobolka Habil EMİR, Lataliyaha Sharciga ee Gobolka Faik GÜLER iyo Maareeyayaasha Adeegga Basmane [More ...]
TCDD waxay ka qaybqaadataa Fair Worker Fair
Madaxweynaha Office Resources Human ee Turkey waxa taladoodu hoos iskaashiga Madaxtooyada 87 8 gobolka, by cadaalad xirfadiisa ugu horeysay jaamacad ee abaabulan ka March 5 2019 furay Mersin. Gaadiidka iyo Kaabayaasha TCDD [More ...]
Heerka Isku-tallowga ee Efeler, Maalinta 4 iyo Dayac-tirka Gaadiidka
Aydin ee degmada Efeler Sogukkuyu heerka isgoyska, 4 ayaa u xirnaa taraafikada ilaa maalinta. La'aanta caqabad ku haysa wadada tareenka, oo loo yareeyay hal haad, ayaa soo jiidasho weyn ka bixineysa wadayaasha iyo ganacsatada gobolka. Saturday [More ...]
8 Maarso ee Mareynkanka
Duqa Magaalada Denizli ee Magaalada Magaala Weyn Cusmaan Zolan wuxuu cadeeyay in dhamaan dumarka doonaya inay aadaan Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau maalinta 08 Maarso ee Maalinta Haweenka Caalamiga ah waa lacag la’aan. Xoojinta nolosha bulshada ee dadka Denizli [More ...]
Shidaalka Shidaalka Dhammaystiray 11 Abriil Comcom to City Park Completed
Buundada birta ee xidhi doonta 11 Nisan Complex iyo 11 Nisan City Park, oo ay dhisi doonto Dawlada Hoose ee Magaalada Şanlıurfa. Loo dhisay iyadoo la raacayo qaab dhismeedka Ottoman iyo Seljuk 11 Abriil [More ...]
Adeegga Gaadiidka Dadwaynaha ee Dagen ee Quarter
Degmada Diyarbakır ee Magaalada Caasimadda ah, Degmada Ergani iyo codsigii ay sameeyeen dadka deggan degmada, Ergani oo ku sii jeedda kooxda iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha illaa hadda kama aysan bixin jidkii gaadiidka dadweynaha ee loo abuuray xaafada Dağarası. Magaalada Diyarbakir Weyn [More ...]
Gaadiidka hore ee Palace of Justice
Dawlada Hoose ee Magaaladda Caabudwaaq, ee gadaal ka hadalka wada hadalka ayaa mar kale yareynaysa isu socodka suuqa waxaay intaa raacisay talaabooyin cusub oo muhiim ah. Si loo yareeyo qulqulka taraafikada ee Adana, Adana, oo abaabushay wadada 5 ee xarunta dukaamaysiga [More ...]